moi: သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအား ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Dr. Luan Thuy Duong တွေ့ဆုံ
သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအား ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Dr. Luan Thuy Duong တွေ့ဆုံ
သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး သူရ ဦးအောင်ကိုသည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Dr. Luan Thuy Duong အား မေ (၃) ရက်တွင် ရုံးအမှတ်(၃၅)ရှိ သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ဧည့်ခန်းမ၌ တွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဗီယက်နမ်ဆက်ဆံရေး ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်သည့် နှစ် (၇၀) ပြည့် အထိမ်းအမှတ်နှင့် မြန်မာ-ဗီယက်နမ် သံတမန်ဆက်ဆံရေးထူထောင်ခြင်း (၄၂) နှစ် ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ယဉ်ကျေးမှုလုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရေးနှင့် နှစ်နိုင်ငံအကြားတည်ရှိနေသော ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုများကို ပိုမိုမြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။